Sony Xperia 10 Ary Xperia 10 Plus: Famaritana, vidiny ary famoahana | Androidsis
Sony dia iray amin'ireo marika andrasana indrindra amin'ity MWC 2019 ity, nanomboka Nampanantena izy ireo fa hamela andian-baovao ho anay manan-danja. Tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo no nandeha ny tsaho fa hampiditra fanovana anarana amin'ny sehatry ny telefaoniny ilay orinasa, taorian'ny fivoahana momba izany. Fanovana anarana izay tanteraka tamin'ny farany. Satria avelany miaraka amina telefaona finday nohavaozina isika. Ny maodely voalohany dia avy amin'ny elanelany: ny Sony Xperia 10 sy ny Xperia 10 Plus
Ireo Sony Xperia 10 sy Xperia 10 Plus dia fitaovana manaraka ny tsipika mitohy, amin'ny ampahany, amin'ilay marika. Na dia miavaka aza izy ireo indrindra ho an'ny filàny amin'ny efijery lehibe, izay mibodo ny ankamaroan'ny eo alohan'ny fitaovana. Inona no azontsika antenaina amin'ity tandavan'i Sony malaza ity?
Hatramin'ity modely ity dia miala amin'ny 18: 9 na 19: 9 ny tahan'ny orinasa amin'ny lamaody eo amin'ny tsena. Nandeha dingana lavitra kokoa izy ireo teo amin'ny lafiny fampiasana ny aloha ary mamela antsika hanana smartphone izay tonga miaraka amin'ny tahan'ny 21: 9. Takelaka tsy manam-petra, izay mampanantena fanandramana mpampiasa milentika amin'ny fotoana rehetra.
avy eo Isika tsirairay dia miresaka momba ny tsirairay amin'ireo smartphone roa ireo. Mba hahitanao ny tsy fitovizan'izy ireo.
1 Famaritana Sony Xperia 10
2 Famaritana Sony Xperia 10 Plus
Famaritana Sony Xperia 10
Amin'ny ambaratonga teknika, miatrika maodely afovoany izahay. Manaraka tsara amin'ny lafiny famaritana izy io, na dia misy lafin-javatra roa aza mety nahadiso ny marika, toy ny batterie izay toa tsy dia ampy loatra. Fa ity dia zavatra azo jerena amin'ny fampiasana ilay fitaovana. Ireto ny masontsivana feno an'ny Sony Xperia 10
Sony Xperia 10 famaritana ara-teknika
modely Xperia 10
efijery LCD 6-santimetatra misy vahaolana feno HD + sy tahan'ny 21: 9
Fakan-tsary aoriana MP 13 + 5
Fakan-tsary aloha 8 MP
Fitaovana hafa Mpamaky ny dian-tànana eo amin'ny lafiny NFC
bateria 2.870 mAh miaraka amina fiampangana haingana
lafiny 156 x 68 x 8.4 mm
lanja Gramin'ny 162
Tsy misy fisalasalana fa ny efijery no singa manintona ny saina indrindra amin'ity smartphone ity. Ny marika dia nisafidy ny hampihena bebe kokoa ny endriny, indrindra ny lafiny. Ka ity Sony Xperia 10 ity dia efa tena akaiky ny foto-kevitry ny efijery rehetra. Ho fanampin'izany, ho fifalian'ny maro, na ny fehilava na ny lavaka eo amin'ny efijery dia tsy nampiasaina.
Amin'ny maha processeur azy ireo dia avelany miaraka amin'i Snapdragon 630 izahay, izay safidy tsara ao anatin'ny elanelam-potoana. Mahery kokoa sy mahomby kokoa noho ny teo alohany, Snapdragon 625. Na dia tsy ampy aza ny bateria hitantsika ao amin'ilay fitaovana, 2.870 mAh. Indrindra raha heverintsika fa finday avo lenta io. Na dia manararaotra manararaotra ireo batterie ireo matetika aza i Sony dia tsy maintsy ho hitantsika ny fomba fiasany.
Raha ny fakan-tsary dia manohy mahita ny zavatra hitantsika eo afovoany izahay. Ny Sony Xperia 10 dia miloka amin'ny fakantsary aoriana avo roa heny, raha eo anoloana dia manana solomaso tokana isika. Ho fanampin'izay, ny telefaona dia efa miaraka amin'ny Android Pie amin'ny maha-rafitra fiasa azy.
Famaritana Sony Xperia 10 Plus
Amin'ny toerana faharoa no ahitantsika an'ity smartphone ity. Raha ny anarany dia mamela antsika haminavina, ity Sony Xperia 10 Plus ity dia maodely somary mandroso kokoa noho ilay teo aloha. Izy io dia manana efijery somary lehibe kokoa, mitazona io tahan'ny 21: 9 io, processeur tsara kokoa ary matanjaka kokoa amin'ny ankapobeny. Saingy mitoetra ao anatin'ny elanelam-potoana io. Ireto ny fiparitany:
Famaritana ara-teknika Sony Xperia 10 Plus
modely Xperia 10Plus
efijery LCD 6.5-santimetatra misy vahaolana feno HD + sy tahan'ny 21: 9
Tahiry anatiny 64GB (azo ovaina hatramin'ny 512GB)
Fakan-tsary aoriana MP 12 + 8
Fakan-tsary aloha MP 8 miaraka amina f / 1.4 aperture
lafiny X X 167 73 8.3 MG
Sony dia nanao batemy ny famolavolana findainy vaovao miaraka amin'ny anarana hoe The Ultimate Wide. Izy io dia efijery lava kokoa noho izay hitantsika amin'ny marika hafa ankehitriny. Zavatra mahaliana ity, satria mitazona ny sakan'ny marika hafa, na dia manify aza, fa miaraka amin'ny efijery lava kokoa. Mahaliana ny mahita ny fomba fiasany rehefa mandany atiny na mampiasa fampiharana amin'ny fitaovana.
Ho an'ny ambiny, azontsika atao ny mahita fa ity Sony Xperia 10 Plus ity dia somary matanjaka noho ny teo aloha. Amin'ity tranga ity dia ampiasaina ny processeur Snapdragon 636, izay tsara kokoa noho ilay teo aloha. Ho fanampin'izany, izy io koa dia miaraka amin'ny fahafaha-manana RAM bebe kokoa ao anatiny, izay ahafahan'ny fiasan-tsiranoka betsaka kokoa amin'ny fotoana rehetra. Ho an'ny bateria, ny orinasa dia nampiasa 3.000 mAh amin'ity tranga ity, miaraka amina fiampangana haingana ihany koa. Ny fitehirizana 64GB dia azo velarina amin'ny microSD.
Toy ny amin'ny maodely hafa, hitantsika eo amin'ny sisiny ilay sensor momba ny dian-tànana amin'ity Sony Xperia 10 Plus ity. Izy io dia miaraka amin'ny Android Pie zanatany, araka ny voamarina amin'ny fampisehoana azy. Raha ny momba ny fakantsary dia miloka amin'ny fitambarana roa ao ambadika izy ireo ary sensor tokana eo anoloana ny fitaovana. Zavatra izay hitantsika matetika eo afovoany.
Amin'ny tranga Sony Xperia 10, azontsika atao ny mahita fa tsy misy afa-tsy iray ny kinova finday amidy. Voamarina fa halefa eny an-tsena amin'ny volana martsa, amin'ny loko mainty, volafotsy, manga ary manga mavokely. Na dia amin'izao fotoana izao aza dia tsy manana vidiny ho an'ny fitaovana izahay. Manantena izahay fa hihaona aminao vetivety.
Toy ny tamin'ny maodely teo aloha, tsy manana angona be loatra isika amin'izao fotoana izao momba ny fanombohana ny Sony Xperia 10 Plus. Ny marika dia tsy nanome daty antsika, na dia antenaina fa hitranga ihany koa amin'ny volana martsa. Amin'ny anao, ianao dia ho afaka mividy telefaona amin'ny loko mainty, volafotsy, manga ary volamena. Tsy fantatsika ihany koa ny momba izany vidiny izany. Ka manantena izahay fa hahalala andinindininy misimisy kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Sony » Sony Xperia 10 sy Xperia 10 Plus: ny elanelam-potoana vaovao an'ny Sony (Video)
Sony Xperia 1: Ny sainam-barika vaovao (Lahatsary)